တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: စာနာစိတ်ရှိမယ် ဆိုရင်
Posted by မေဓာဝီ at 2:28 AM
မေ့Blogလေးကို ခဏခဏလာလာချောင်းနေတာ။ လွမ်းလို့။ postအသစ်လေးတွေတွေ့ရတော့ အရမ်းပျော်သွားတယ်။ တို့ငယ်ငယ်က စာတွေ၊ ကဗျာတွေ ခိုးခိုးရေးတာ အဖေမိသွားလို့ မီးရှို့ပစ်တော့ ငိုခဲ့ရတာ မှတ်မိတယ်။ ဝါသနာဆိုတော့ ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်လှတယ်နော်။ မေရေးတဲ့စာတွေက စေတနာတွေ အပြည့်မို့ အဲဒီစေတနာအကျိုးတွေ မေရမှာပါ။ အဆင်ပြေရင် postအသစ်လေးတွေ တင်ပါနော်။ စောင့်ဖတ်မယ်။ ဒီpostလေးထဲကလို အဖြစ်တွေ ခုထိရှိနေတုန်းတဲ့မေရေ။ စာနာစိတ်ရှိမယ် ဆိုရင်...။
2/23/2008 3:07 PM
Welcome back Ma May.
Missing you so much.. :(
အမ.. ဟုတ်တယ်.. ကျနော်လဲ အဲလိုမျိုးတွေ မြင်ဘူးတယ်.. ကျနော်က ကားကြပ်ရင် ဘယ်တော့မှ စီးဘူး.. အဲလိုလူတွေ တွေ့ရင် ကားပေါ်က ဆင်းရင် ဒေါက်နဲ့ နုတ်ခမ်းကို ဖိပီး မတော်တဆလိုလိုနဲ့ တက်နင်းခဲ့တယ် ဟီးဟီး..
အမ..နောက်လဲ ဆက်ရေးပါ.. မျှော်နေမယ်..
မလုပ်ခင် စဉ်းစား..လုပ်ပီးမှ တောင်းပန်တာ မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ ပညာပေး သင်ခန်းစာပို့စ်လေး ရေးပေးပါ..အမ
2/24/2008 12:17 AM
´မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အရှက်တရားရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်အခုလိုတွေ ဖြစ်ကုန်ရတာလဲ.. မပြောတတ်တော့ဘူး´နောက်တခုရှိသေးတယ်။ လူငယ်စုံတွဲတွေကိစ္စ၊ တကယ်ဆို ပန်းခြံလိုနေရာမျိုးလူမြင်ကွင်းမှာထက်စာရင် လုံခြုံလွတ်လပ်ရာမှာ ချစ်ရည်လူးချင်ကြမှာပဲ. တခုခက်တာက ရန်ကုန်ကဟိုတယ်နဲ့ တည်းခိုခန်းတွေမှာ ရန်ကုန်မှတ်ပုံတင်ဆိုရင် အခန်းငှားခွင့်မရှိဆိုတဲ့ ဥပဒေမျိုးတွေရှိနေလေတော့လည်း... ဘယ်သူက ဘာများတတ်နိုင်အုံးမှာလည်း... တိုးရစ်တယောက်ရဲ့ နားမလည်နိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေတဲ့ ရန်ကုန်ကလူတယောက်လို This is Myanmar ဆိုတဲ့ ယောင်ဝါးဝါးအဖြေမျိုးကိုလည်း မကျေနပ်တာ အမှန်ပါ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေဓာဝီ ပြန်ဘလော့နေတာကို ၀မ်းသာကြိုဆိုပါတယ်...
2/24/2008 9:45 AM
မမေစာပြန်ရေးတာ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ. ဒါမှပဲ ဘလော့ဂ်လောကထဲက ကွက်လပ်လေးတစ်ခု ပြန်ပြည့်လာမှာဗျ. ကျွန်တော်လည်း မမေဆီကို လာမယ်လာမယ်နဲ့ မလာဖြစ်ဘူး. သိတယ်မလား... ဟာ ပြောရင်း မက်ထရိုပြောင်းရတော့မယ်... နောက်တွေ့မယ်နော့. ဟတ်ဟတ်ဟတ်
2/25/2008 4:00 AM